3-Marko Grujic- Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ay muhiimada wayn u yeelan doonaan kulamada saaxiibtinimo maadaama oo uu Jurgen Klopp aad u jecel yahay da’yarka reer Serbia.
Grujic ayaa xili ciyaareed cajiib ah ku soo qaatay kooxda Jarmalka ah ee Hertha Berlin wuxuuna hadda heli karaa fursad kooxda kowaad ee Liverpool ah iyada oo Adam Lallana uu aad u liitay isla markaana ay da’da James Milner sii waynaatay.
Laakiin waxa uu Marko Grujic ka sameeyo kulamada saaxiibtinimo ayaa noqon kara mid saamayn ku yeelan karta go’aanka kala shaandhaynta Klopp ee ciyaartoyda kooxdiisa xagaagan.
Haddii uu Grujic awoodi waayo in uu Klopp ku qanciyo kulamada saaxiibtinimo waxaa la filayaa in uu xili ciyaareed kale amaah ku qaadan doono isla markaana loo balan qaadi doono in kadib uu fursad toos ah heli doono.
4-Adam Lallana: Xili ciyaareedkii dhamaaday waxa uu Lallana u ahaa mid murugo badan balse farxad ugu soo dhamaaday in uu helay bilada Champions league isaga oo aan wax shaqo ah ka soo qaban.
Liverpool ayaa u furan in ay Lallana xagaagan iibiso haddii ay ku hesho dalabka ay ku fasixi karaan, laakiin Lallana ayaan wali isdhiibin wuxuuna kulamada saaxiibtinimo ka samayn doonaa wax walba oo awoodiisa ah si kooxda loogu sii hayn karo.
5-Alex Oxlade-Chamberlain: Waxa uu xili ciyaareedkii la soo dhaafay ahaa mid Alex Oxlade-Chamberlain uu dhaawac ku maqnaa balse dhamaadkii waxa uu soo laabtay isaga oo aan helin wax fursad uu kooxda shaqo ugu abtay.
Alex Oxlade-Chamberlain waxa uu hore iskugu soo muujiyay xili ciyaareedkiisii kowaad ee Liverpool laakiin dhaawicii ku soo gaadhay kulankii Roma ee Champions league ee 2017/18 kii ayaa waayihiisii Liverpool hoos u dhigay.
Alex Oxlade-Chamberlain waxa uu kulamada saaxiibtinimo ka dhigan doonaa goobtii uu Klopp ugu qancin lahaa in uu shaxdiisa ka mid noqdo xili ciyaareedka cusub oo uu go’ankiisa ku adkayn lahaa.
Alex Oxlade-Chamberlain oo si buuxda u haysta taageerada jamaahiirta kooxdiisa isla markaana ka mid ah ciyaartoyda uu Klopp jecel yahay waxa uu kulamada saaxiibtinimo ka dhigan doonaa goobtkii uu dib iskugu habayn lahaa.